गर्भनिरोधक पिल्स कति सुरक्षित ? यस्तो छ वास्तविकता - Halesi News
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)का अनुसार विश्वभर १० करोडभन्दा धेरै महिला गर्भनिरोधक चक्की (पिल्स) सेवन गर्छन ।
सन् १९६० को दशकमा गर्भनिरोधक पिल्सको सुरुवात भएदेखि नै यसको प्रयोग गर्दा हुने फरक फरक नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) देखिने गरेका छन् । केही समयअघि मात्र युरोपेली राष्ट्र डेनमार्कमा गरिएको एउटा अध्ययनले पिल्सको उपयोग गर्दा अवसाद (डिप्रेसन) हुने जोखिम बढ्छ ।डेनमार्कका अध्ययनकर्ताहरूले करिब १० लाख महिलाको मेडिकल रेकर्डको अध्ययन गरेका थिए । १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ती महिलामा पिल्स खानुअघि डिप्रेसनका कुनै पनि लक्षण देखिएका थिएनन् ।
Prevजण्डिस छिटो निको पार्ने एक मात्र औषधी :भुइँअमला
Nextयी हुन् रगतमा कोलेस्टेरोेल घटाउने खाना… सबैले जान्न पर्ने
श्री मुक्तिनाथ भगवानले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र १ गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
श्रीमान कोरिया भएको मौका छोपि अर्काकी श्रीमतीसँग नौ महिना लिभिङ टुगेदर, त्यसपछि चक्कु प्रहार गरि हत्या